Karoora Sonaawaa akka Sabaatti Oromiyaa Bilisoomsuf Qindaaweetu, Akeeka fi imaammata ‘Mastar Pilaanii TPLF/Finfinnee’ fashalsa -
Sadaasa 13, 2015
Rakkoon har’a Finfinnee harkaa qabu, jaarama impaayara Itoopiyaa calqaba Minilik akeeke waliin hidhannoo qaba. Hundeen yookiin maddi rakkoo kanaa haala bilchaatadhaan yoo hubatamuu baate, carraaqiin rakkoo ‘Mastar Plaanii Finfinnee’ faluudhaaf godhamu, dadhabbii qofaa nama jalaa ta’a. Balaan sagantaa diinaa kan Finfinnee irratti si’ana agaamamee jiru kanumaa guutuu Oromiyaa rooraasaa jiru. Rakkoon Finfinnee qaama rakkoolewan gara garaa kan Oromiyaa harkaa qabuudha. Kanaafuu, farra diinaa kan yeroo irraa yerootti Finfinnee irrattii fi Oromiyaa guutuu irratti aggaamamaa jiru irra aanuun kan dandahamuu, hoo golgaan sirna koloneeffataa Habashaa ummata Oromoo iratti fe’amee jiru kana yeroo maayitiif qabsoo guutuu sabaatiin of irraa darbine qofa akka ta’e hubatamuu qaba.
Erga bara mootummaa gabroomfataa Habashaa kan Minilikiin durfamu maadhee isaa Finfinnee irratti dhaabbatee kaasee, dhumaatin lammiiwwan keenyaa keessattuu kan akka Gullallee, Eekkaa, fi Galaan waan yaadatamu. Imaammata sanyii duguuggaa qabaachuudhaan, bobbaan Minilik ummata naannawa Finfinnee irratti geggeessee ture garii isaanii fixu, garii isaani ammoo akka buqqa’anii lafa isaani irraa baqatan taasifaman.
Mootummoonni Habashootaa kan Minilik booda dhufaniis Impaayara Itophiyaa dhaalan, akeekuma Minilik faana bu’uudhaan, Finfinnee magaala guddoo impaayarittii godhatanii bal’inaan irra qubbachuu itti fufan. Akkuma qubsuma isaanii diriirsaa fi baballisaa deemaniin, buqqa’insi Oromoota naannoo Finfinnee itti fufaa deemun isaa waan seennan galmeesse. Koloneeffataan Habashaa haara,’a, kan murna Adda Bilisummaa Ummata Tigraay (ABUT, TPLF) tiin gaggeeffamu, kan maqaa ‘Mastar Plaanii Finfinnee’ jedhamu itti moggaasee hojjii irraa oolchuf tattaaffii gochaa jiru, sadarkaa kamiinuu, gocha ummata Finfinnee irratti mootummooni dursan raawatan daran kan caalu. Balaan ABUT Ummata Finfinnee, dabrees ummata guutu Oromiyaa irratti dhaqqabsiisaa jiru. htaalaan suukanneessa dha. Baroottan digdaman dabran keessa, ABUT:
Maqaa misoomma jedhuun, maatiwwan Oromoo naannawaa Finfinnee qotisaan jiraachaa turan kan kumaa 150 caalan buqisuudhaan, gariin isaanii akka biyyaa ba’an, kan hafan magaala keessatti kadhattuu ta’anii akka jiraataniif saaxilee jira.
Lafa, maatiiwwan Oromoo irraa buqisee bal’inaan ummata isaa irra qubachiisa.
Karoora lakkoofsa Oromoo magaala Finfinnee keessaa haphisuu irrati halkanii fii guyyaa hojjachaa jira.
Naannawa Oromiyaa adda addaa irraa ummata Oromoo miliyoonnotaan lakkaawaman lafa isaani irraa ariyudhaan, abbooti qabeenyatti kireesudhaan/gurguruudhan jireenya ummata kanaa jeequudhaan; gadadoo fi beelan akka hiraaran dabrees gariin akka dhuman gochaa jira.
Qotee-bultoota, barattoota, fi walumaagalattuu ummata Oromoo imaammata isaa dura dhaabbatan fixaa, kumaatamaan mana hidhaatti guuraa jira.
Lafa Oromoo dabarsee sabaa fi sablamoota ollaa Oromiyaa jiraniif kennuudhan ummatoota jidduutti waldhabbii lubbuu namootaa baayyee gaaga’ee fi gaaga’uuf jiraatu uumaa jira.
‘Maastar Pilaaniin Finfinnee’ ABUT, karoora gara-fuulduratti caala Ummata Oromoo dhabamsiisudhaaf kurfaawe akka ta’etti hubatamuu qaba. Akka karoora kanaatti, magaala Finfinnee bal’ifachuudhaaf, magaalota ollaa Finfinnee jiran liqimsuudhaan ummata magaaloota kana keessa qubatan, kan miliyoona lamaa ol ta’an buqqisuudha. Hireen ummata buqqa’uuf jiraatu kuni maal akka ta’uuf jiraatu tilmaamuun nama hin-rakku. Hiree dhumaatitu isaan eeggata. Kanaaf, karoorri ABUT ‘Maastar Pilaanii Finfinnee’ tiin beekkamu kuni, akka karoora sanyii duguuggaa Oromoo irratti agaamamee-tti fudhatamu qaba.
Tokkummaan Humnoota Bilisummaa Oromiyaa (THBO/ULFO) gidiraa sanyii Oromoo duguugu ABUT itti ture fii, ammas itti jiru, kara fulduraatiifis karoorfachaa jiru haalan balaaleffata. Dhumaati ummata Oromoo irra ga’e maraaf ABUT itti gaafatamaa jalaa akka hinbaane akkeekkachiisa.
THBOn ‘Mastar Pilaanii Finfinnee’ haalan dura dhaabata. ABUT, karoora Finfinnee kana hojii irra oolchuuf boobbaa itti jiru akka hatattamaan dhaabu THBOn ni akeekkachiisa.
Mormii fii duradhaabbannoon ‘Mastar Pilaanii Finfinnee’ irratti ummanni keenya guutu Oromiyaa keessatti agarsiisa jiru dinqisiiffachaa, THBOn sochii ummataa keenyaa kana ni deeggara; waan danda’u maraanis cinaa dhaabbata.
Haalli ummani Oromoo naannawa Finfinnee walumaagalattuu Oromiyaa guutu keessa jiru sadarkaa yaaddessaa irraa ga’ee jira. Miidhaan ABUT saba Oromoo irran ge’aa jiru hegeree/ egeree saba keenyaaf sodaachisaa ta’aa jira. Kana hubachuudhaan,THBOn akka sabni Oromoo qindoominaan sosso’ee roorroo fi balaa alagaa jalaa akka bahu/ ba’u waamicha lammummaa godha. Karoora sonaawaa qabsoo bilisummaa Oromoo akka sabaatti kurfeeffannee, murannoodhan akka qabsoofnu waamicha dabarsaa, akka qindoomina sochii saba waliigalaa qabaannee, balaa diinaa kan yeroo iraa yerootti nutti aggaamamu jalaa baraaramnuuf ummata Oromootif THBOn waamicha dabarsa.
‘Mastar Pilaanii Finfinnee’ haa ta’uu walumaagalattuu roorroo jireenya saba keenyaa sodaachisu mara dura dhabbachuudhaaf, THBOn karoora hojjii sabni Oromoo irraatti bobbahuu qabu akka armaa gaditti dhiheessina;
Karoora yeroo gabaabaa
Humna tokko kan bobbaan isaa ABUT ‘Mastar Pilaanii Finfinnee’ hojiirraa akka hin-oolle falmu/dhaabu jaaru.
Humna kana jaarmolee hawaasa Oromoo guutu addunyaa irratti argaman fi humnoota qabsoo bilisummaa Oromiyaa keessaa walitti fidanii jaaru..
Humna kanaaf hojii irratti bobbaahu qopheessaniifii daddafiidhan hojii akka calqabu gochu..
Humna kanaaf akkaataa qabeenya horii, meeshaa fi humna namaa maddisiifamu karoora baasuu
Humna kanaaf, bobbaa gootu irrattii murnoota gorsan jaarufi..
Karoora yeroo dheera
Haalli ABUT Oromootti jiru hubachuudhaan, humnoonni bilisummaa Oromiyaa marti haal-duree tokko malee walitti dhufanii mari’achuudhaan karaa tokkomanii ummata Oromoo guutuu of-jala hiriirsanii roorroo diina dura dhaabatan.
Jaarmayoota Oromoo bilisa ta’an, kan ilaalcha adda addaa qaban mara, haala waliin waan saba irratti hojjatan waliin mari’achuu, dabrees bakka danda’ametti waliin hojjachu.
Sabaa fi sablamoota akkuma Oromoo miidhamaa jiran waliin tumsa jaarame; daran jabeessuu
Yeroon kuni ummata Oromootif yeroo murteessadha. Badii irraa of-oolchuf akka sabaatti diina irratti ka’uu qabna. Falmiin keenya hardha Finfinneedhaaf haa ta’u malee, falmii keenya daran cimsinee Oromiyaa guutuu harqoota gabrummaa jalaa haa baafnu. Kanaafis, tokkummaan qabsaawota Oromoo hatattamaan mirkanaawuu qaba.
Ready or not – drought tests Ethiopia
4 thoughts on “Karoora Sonaawaa akka Sabaatti Oromiyaa Bilisoomsuf Qindaaweetu, Akeeka fi imaammata ‘Mastar Pilaanii TPLF/Finfinnee’ fashalsa”
Ya jarra kenya faffaca,uun kun essanu nu hin gahu dhabbotni oromoo tokkoma!
Ya jarra kenya faffaca,uun kun essanu nu hin gahu dhabbotni oromoo tokkoma! Malo salphanee nuuti oromooni salphina kana kessa bahuf dhabbotni keenya tokkome QBO irrati yo cichee qofa!
Ajjaa’iba! ULFOn kun emmo kaam yaa jarran! Beqqa ye oromo mihuran tebiyyewoch ena diaspora sirachew beye amettu, ende beqqkolo qitta adadiss dirjittin meteftef honne ende!
Dejene – alemaweqhin ena xalat mahonihin yemiaregagetaw ULFO mache endetemeserest alemaweqhin naw.